10 Ebe ezumike kacha mma nwere nnukwu ụlọ ikpe nkata | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ebe ezumike kacha mma nwere nnukwu ụlọ ikpe nkata
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel UK, Travel Europe
Echiche dị ịtụnanya, acha na fun, enwere ụlọ ikpe basketball dị ịtụnanya n'obodo ọ bụla ị rọrọ nrọ ileta. Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu basketball na -anụ ọkụ n'obi, pro, ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịgba ụfọdụ hoops, ndị a bụ 10 ebe ezumike kacha mma nwere nnukwu ụlọ ikpe basketball.
1. Courtlọ ikpe bọọlụ bọọlụ 3D nke Munich nke Germany
Home ka otu n'ime ámá egwuregwu bọọlụ kacha dị ịtụnanya na Europe, Munich bụ ebe ezumike na -atọ ụtọ ma dịkwa egwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ụfọdụ hoops na ama egwuregwu basketball dị egwu, Mgbe ahụ ụlọ ikpe basketball 3D nke Munich bụ ebe ị ga-eme ihe. Ụlọ egwuregwu bọọlụ German a ga -eburu egwuregwu gị gaa ọkwa ọhụrụ nke akpụ, ma ọ bụrụ na ị jisie ike slam ebe a, ị ga -aga nke ọma ebe ọ bụla.
Yabụ, Ogige basketball 3D ga -akpali gị ịkwalite egwuregwu gị. Ọ ga -adị mkpa ka ị na -aga n'ihu na akpụ akpụ gburugburu ụlọ ikpe nzuzu a. Ndị ọzọ karịa na basketball nọ n'ọnọdụ dị mma maka egwuregwu ọ bụla, ọ bụrụ na -ịchọrọ ị nọgidesie ike na ezumike gị, na n'ezie kpọpụta ndị otu gị.
2. Ogige Bọọlụ Nkata Pigalle Paris
Ọtụtụ ndị njem na -aga Paris maka ịzụ ahịa na ibi ezigbo ndụ, maka ezumike izuike ma ọ bụ ihunanya. Ọ bụ ezie na Paris bụ ebe ama ama maka ezumike na -arọ nrọ ma na -atọ ọchị, ọ bụkwa nnukwu ọnọdụ maka ihe omume n'èzí. Paris nwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ na Osimiri Seine maka ịga ije, ma ọ bụ ịgba ígwè, na mgbakwunye na ogige basketball kacha mara mma.
Ogige basketball Pigalle bụ ihe okike Nike mepụtara, ọrịa-Studio, na ụdị ejiji French Pigalle. Mmekọrịta ha mere ka ihe a gbawaa, tucked-away n'etiti 2 ụlọ ụlọ basketball basketball. Agba agba agba Pigalle dị oke egwu, n'etiti etiti Parisian. Bọọlụ basketball a na -arụ ọrụ nke ọma yana ọ dị mma ịgbapụ ụfọdụ mgbọ 17 Rue Duperre.
3. Courtlọ ikpe ụlọ elu ụlọ nke ụlọ elu Dubrovnik Croatia
Dubrovnik bụ ebe ezumike mara mma, gbara ya gburugburu na echiche nke Oké Osimiri Adriatic. Terra-cotta ụlọ ụlọ dị ebe niile, facades ọcha megide oké osimiri turquoise, na -adọta ọtụtụ narị ndị njem kwa afọ. Dubrovnik nwere mgbidi obodo mechiri emechi, echekwara nke ọma n'ime ọtụtụ narị afọ, otu ahụ kwa bụ otu ụlọ ikpe basketball kacha mma n'ụwa.
Ogige basketball a dị n'elu ụlọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze, na echiche dị ịtụnanya banyere Oké Osimiri Adriatic. Were ya na ị na -agba egbe nwere ọmarịcha echiche Old Town na mbara igwe na -enweghị njedebe. O doro anya na ogige basketball n'elu ụlọ City Hall bụ otu n'ime basketball kacha n'ụwa niile.
4. Ụlọ nke Mamba Bọọlụ Nkata basketball Shanghai China
Shanghai bụ otu n'ime obodo kacha ọhụrụ na ihe ọchị n'ụwa. Ụlọ elu ndị na-eku ume, na akara ngosi dị ogologo karịa ndụ, na nke kachasị elu bụ ogige basketball nke Ụlọ Mamba, nke Nike dere. Ogige bọọlụ basketball a dị egwu na -atọ ụtọ ma na -emepụta ihe, emebere nke ọma maka otu ebe ezumike kacha mma n'ụwa.
Ogige basketball nke Shanghai House nke Mamba bụ ogige basketball zuru oke nke akwadoro maka egwuregwu gị kacha mma. Emebere ụlọ ikpe ahụ maka njegharị Nike Rise na China, ọ ga -eju gị anya site na ngosipụta ọkụ ọkụ LED na -arụ ọrụ. Ya mere, nzọụkwụ ọ bụla ị na -eme n'ukwu na -eme ka ala na -enwu gbaa, ìgwè mmadụ ahụ wee tie mkpu n'oké ihe ijuanya.
5. Brighton Beach Court nke England
Aja aja aja, nnukwu mkpagharị, na ikuku oke osimiri, Brighton bụ nnukwu ebe ezumike. Ọ bụ ezie na a na -amakarị England maka mbara igwe isi awọ, Brighton bụ ọmarịcha njem ezumike n'oké osimiri. Ebe oke osimiri Brighton na -eme ka ọ dị mma maka ịme ihe n'èzí.
Ịgba mgbọ n'okpuru anwụ na -amịpụ ma na -awụpụ n'ụlọ ikpe ozugbo n'oké osimiri bụ ahụmịhe dị egwu. Ogige basketball basketball nke Brighton nwere nnukwu ọnọdụ maka ụdị onye ọkpụkpọ ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla. Ya mere, ọ bụrụ na ị na -achọ ezigbo nọ n'ọrụ ezumike, basketball, igwu mmiri, na izu ike n'akụkụ osimiri bụ ụzọ dị mma iji zuru ike wee nweta ọkwa ike ndị ahụ ọzọ.
6. Ogige Nkata bọọlụ Nike Thames River London
Ị nwere ike imefu ego 8 ụbọchị na London, ma achọpụtabeghị ihe niile obodo a na -atọ ụtọ nwere inye. Site na ịzụ ahịa ruo nka na egwu, London bụ nnukwu ebe ezumike maka solo njem na ezinụlọ. Ya mere, ọ gaghị eju gị anya na London bụ nnukwu obodo maka ihe omume mpụga, nwere ogige ntụrụndụ dị egwu na Osimiri Thames.
Ọchịchị & Ogige basketball basketball Jordan na Osimiri Thames bụ ogige basketball dị egwu dị egwu. Ndị na -egwu egwuregwu na -enwe ọmarịcha ikuku na -enye ume ọhụrụ site na osimiri n'etiti egwuregwu ma nwee ike mikpuo ọmarịcha osimiri na echiche obodo. Ọzọkwa, Nhazi ụlọ ikpe ahụ na-enye conditi0ns kacha mma nwere ike ịhazigharị hoops na ala Nike a tụrụ atụ maka egwuregwu dị larịị na enweghị mmerụ ahụ..
7. Ogige Nkata Belgian na Aalst
Ọmarịcha ọdịda, juputara na mmadụ na December, mgbe ọtụtụ narị ndị njem na -abịa maka ememme Aalst kwa afọ, enwere ihe ọzọ mere ị ga-eji gaa Aalst n'afọ niile. Otu n'ime ihe ndị dị ịtụnanya ebe a bụ Ogige basketball basketball mara mma nke Aalst, ọrụ omenka Katrien Vanderlinden. Na ụdị dị iche iche nke agba dị iche iche, Vanderlinden dabere na nka ya na egwuregwu ụmụaka, Ihe mgbochi ezi uche.
Ya mere, Aalst abụwo nnukwu ebe ezumike, na ogige basketball ọhụrụ a kacha mma maka ịgbaso usoro mgbatị ahụ mgbe ị na -ezumike. Ọ bụghị nanị na, mana imewe ahụ na -adọrọ mmasị n'ezie ma ọ bara uru njem otu awa site na Brussels naanị iji nwee mmasị n'otu ụlọ ikpe basketball kacha pụrụ iche na Europe.
Na nlele Panoramic Pacific, ugwu ahịhịa ndụ jupụtara, na ihu igwe ebe okpomọkụ, Costa Rica bụ paradaịs maka onye njem ọ bụla. Naanị ịnọdụ ala na -ekiri mmiri, ma ọ bụ ịga ije n'ụsọ osimiri ga -eme ka ị kwụrụ ọtọ na ọnọdụ izu ike.
Costa Rica bụ ebe ezumike onye ọ bụla rọrọ nrọ, maka izuike ma ọ bụ sọfụ ma na -ekpori ndụ n'èzí. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na otu n'ime ụlọ ezumike ezumike mara mma na -abịa na nnukwu ogige basketball. Finca Austria Obodo anyị nwere ogige basketball dị ịtụnanya na -ele Pacific na ebe igwu mmiri. Kedu ihe ọzọ mmadụ chọrọ maka ezumike okomoko?
9. Ogige Nkata Hong Kong
Ihe dị egwu, otutu, na-akpali akpali, na fun, Ogige basketball nke Hong Kong bụ akara ngosi dịka ụlọ ya dị. Hong Kong bụ otu n'ime ebe kachasị mma ileta na China ekele maka ọdịdị ụwa ya. Site na nnukwu echiche ruo n'ụsọ osimiri na njegharị gburugburu agwaetiti ahụ, Hong Kong na -eme ka mmadụ niile na -alaghachi ugboro ugboro. Ogige basketball Hong Kong buru ibu, ọhụrụ, acha, ma dị na a ezigbo agbata obi.
Choi Hung Estates basketball bụ otu n'ime basketball kacha mma na Hong Kong. Ọzọkwa, ọ bụkwa otu n'ime ebe kachasị agba, ya mere ọ dị mma maka nnukwu foto. Ọ bụrụ na ịgabeghị Hong Kong, maa akwụkwọ njem maka ọmarịcha ebe a, ọ bụ otu n'ime 10 ebe ezumike kacha mma nwere nnukwu ụlọ ikpe basketball.
10. Ogige Nkata Tempelhof Berlin
Ị Funụrị ọ theụ n'èzí dị mkpa bụ ogige Tempelhof feld. Site n'ịgba bọọlụ basketball, ma ọ bụ naanị jụọ oyi, Tempelhof bụ ebe zuru oke na ndụ ọsọ ọsọ na Berlin. Berlin nwere ndụ abalị nke ukwuu, ọ na -amasịkwa ndị ọbịa ya niile, yabụ na ọ bụghị ihe ijuanya na obodo emebere atụmatụ ịnabata mmadụ niile.
Bọọlụ basketball nke Tempelhof nke Berlin bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ikpe basketball na Europe. Dị na ọnụ ụzọ, na mpaghara picnic, na osisi na ahịhịa ndụ gbara ya gburugburu, Ogige basketball a ga -eme ka ị nwee mmetụta dị ịtụnanya na ume na hoop ọ bụla.
Anyị na Save A Train ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem ndị a 10 ebe ezumike kacha mma nwere nnukwu ụlọ ikpe basketball.
Ịchọrọ itinye blọgụ anyị "Ebe ezumike 10 kacha mma na nnukwu ụlọ ịgba bọọlụ" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fholiday-locations-basketball-courts%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
basketball Ụlọikpe bọọlụ Ụlọikpe bọọlụ bọọlụ bọọlụ kacha mma igwu egwu bọọlụ